Semalt को साथ साइबर सुरक्षा
कसरी इन्टरनेट प्रयोग गर्दा सुरक्षित राख्ने
व्यक्तिगत जानकारी सीमित राख्नुहोस्
तपाईं अनलाइन के साझेदारी गर्नुहुन्छ त्यसमा सावधान हुनुहोस्
तपाइँको गोपनीयता सेटिंग्स अन राख्नुहोस्
तपाईले क्लिक गरेकोमा सचेत रहनुहोस्
कडा पासवर्ड छनौट गर्नुहोस्
दुई-कारक प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँको इन्टर्नेट जडान सुरक्षित गर्नुहोस् (VPN प्रयोग गर्नुहोस्)
सावधान हुनुहोस् तपाईले के डाउनलोड गर्नुभयो
सावधान हुनुहोस् जहाँ तपाईं अनलाइन चीजहरू किन्नुहुन्छ
सावधान रहनुहोस् जो तपाईं अनलाइन मार्फत कुराकानी गर्नुहुन्छ
तपाइँको एन्टिभाइरस कार्यक्रम मितिमा राख्नुहोस्
इन्टरनेट एक धनी सुन खानी हो जसले संसारलाई सकरात्मक रूपले धेरै मानेमा परिवर्तन गरेको छ। अझै, यो स्पाम, मालवेयर, भाइरसहरू, जानाजानी र अन्जानमा डाटा उल्लंघन, र धेरै साइबर अपराधहरूको लागि प्रजनन मैदान पनि भएको छ। प्रत्येक वर्ष इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, यी जोखिमहरू द्रुत रूपमा बढ्दै र कठोरताका साथ विकसित हुँदैछन्। अहिले सम्म, त्यहाँ इन्टरनेट को लागी कुनै प्रतिस्थापन छैन, त्यसैले एक मात्र कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ अब इन्टरनेट प्रयोग गर्दा सुरक्षित रहनु हो।
मुद्दा यो छ कि अधिकांश व्यक्तिहरू सुरक्षा सावधानी बिना इन्टरनेट सर्फिंगको साथ जोडिएको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दछन्; यो विनाशकारी हुन सक्छ। इन्टरनेटमा एकल मिसटेपले एक व्यक्तिको सबै चीज खर्च गर्न सक्दछ, तर धेरै व्यक्तिहरू यो कुराकानीको लागि तयार छैनन्। व्यक्तिहरूले आफ्नो पूरै जीवन बचत गुमाएका छन् (ठूलो पैसा) घोटालाहरूमा; पहिचान चोरी हुन्छ, निर्दोष पीडितको लागि कानुनी परिणामको परिणामस्वरूप, उपकरणहरू केवल ब्ल्याकमेलिंगका लागि प्रयोग हुने भ्रामक तस्वीरहरू र भिडियोहरूको लागि मात्र ह्याक हुन्छन्।
त्यो सबै होइन, व्यक्तिगत टिप्पणीहरू वा ब्लग पोष्टहरू पछिल्ला बर्षहरूमा फेला परेको कारणले उनीहरूको रोजगार, ठूलो व्यापार सम्झौता, र राजनीतिक पोष्टहरूको लागत छ। यद्यपि, धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि सोच्दछन् कि यो उनीहरूलाई हुन सक्दैन। तथ्य यो हो कि तपाईं यो गाइड पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ कि तपाईं आफैंलाई इन्टरनेटको जोखिमबाट बचाउनका लागि उपायहरू खोज्नुहुन्छ जुन आज थाहा छ। त्यो गजबको छ; kudos! त्यसो भए, धेरै विज्ञापन बिना नै, यहाँ १० साइबरसुरक्षा सल्लाहहरू छन् तपाईको असुरक्षालाई अनलाइन कम गर्न मद्दत गर्न।
२. कसरी इन्टरनेट प्रयोग गर्दा सुरक्षित राख्ने
तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी सीमित राख्नु पर्छ किनभने यो चोरी हुन सक्छ र जालसाजी गतिविधिहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि अनलाइन डाटा फिशरहरूले तपाईंको पूरा नाम, बैंक विवरणहरू, ठेगाना, सुरक्षा नम्बरहरू, आदिमा पहुँच प्राप्त गरे, तिनीहरूले तपाईंको पैसा सिफन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। तपाईंको तस्वीर समावेश सहितको तपाईंको विवरणहरू चोरी हुन सक्दछ (पहिचान चोरी) र गैरकानुनी मानिसहरूलाई घोटाला गर्न प्रयोग गरिन्छ। जसरी तपाईं आफ्नो विवरणहरू शारीरिक अपरिचितहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्न, तपाईंले तिनीहरूलाई अनलाइन राख्नु हुँदैन जहाँ लाखौं अपरिचितहरूले पहुँच गर्न सक्दछन्।
साथै, तपाईं के अनलाइन साझा गर्नुहुन्छ को बारे मा सावधान हुनुपर्छ किनभने के तपाईंलाई महत्वहीन लाग्छ के तपाईंलाई पछि यति खर्च लाग्न सक्छ। युवा मानिसहरूले प्राय: जातीय स्लुरहरू अनलाइन पोष्ट गर्छन्, यसको मतलब केहि होइन भनेर सोच्दछन्। दुर्भाग्यवश, तिनीहरूको सम्भावित रोजगारदाताहरूले यो पत्ता लगाउँछन्, र यसले उनीहरूलाई जागिर गुमाउँछ। धेरै कलाकार र अभिनेताहरूले उनीहरूको व्यावसायिक सम्झौता र फ्यानबेस गुमाएका छन् असंवेदनशील टिप्पणीहरू वा उनीहरू अनलाइन गरिएका पोष्टका कारण।
यति मात्र होइन, बिभिन्न राजनीतिज्ञहरू (पुरानो र बढ्दो) ले उनीहरूको वरिपरि सार्वजनिक भएको लाजमर्दो वा असंवेदनशील जानकारीका कारण आफ्नो राजनीतिक क्यारियर गुमाएका छन्। तथ्य यो हो कि इन्टरनेट कहिल्यै बिर्सदैन। यो किन तपाईं अनलाइन आफ्नो पोष्ट सीमित गरेर भविष्य पश्चातापबाट आफूलाई बचाउनु पर्छ। तपाईंले कुनै पनि चित्र/भिडियो पोष्ट गर्नु अघि वा केहि अनलाइन लेख्नु अघि, आफैलाई सोध्नुहोस् तपाईंको सम्भावित रोजगारदाताहरू, लगानीकर्ताहरू, फ्यानबेसहरू, दर्शकहरू, र मनपर्दोको प्रतिक्रिया के हुन्छ यदि उनीहरूले तपाईंले पोष्ट गरेको पोस्टमा आउँदछन् भने। यदि तिनीहरूको प्रतिक्रिया राम्रो छैन भने, त्यसोभए त्यो पोस्ट बनाएर पुनर्विचार गर्नुहोस्।
मार्केटरहरू र ह्याकरहरू तपाईंको बारेमा जान्न त्यहाँ सबै कुरा जान्न चाहन्छन्, र यो तपाईंको लाभको लागि होइन। तपाइँले इन्टरनेटमा के पोस्ट गर्नुहुन्छ भनेर तपाइँको बारेमा जान्नबाट अलग राख्दछ (माथि भनिएझैं), तिनीहरू तपाईको बारेमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् के मार्फत र कुन ठाउँमा तपाइँ ब्राउज गर्नुहुन्छ।
बिभिन्न वेब ब्राउजरहरू, मोबाइल अपरेटिंग प्रणालीहरू, र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू मार्केटर्स र मनपर्नेहरूलाई उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूको डाटा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तान्तरणको लागि बोलाइएको छ। यो किन तपाईं सधैं आफ्नो गोपनीयता वृद्धि सेटिंग्स को बारी गर्नु पर्छ यदि तपाईंको अनुप्रयोग तिनीहरूमा। तर तपाइँको अनुप्रयोगसँग ती छैन वा छैन, तपाइँले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी त्यहाँ बाहिर सीमित गरेर आफैलाई बचाउनु पर्छ।
जस्तो कि तपाई खतरनाक छिमेकीमा हिंड्न रोज्नुहुन्न, तपाईंले लि links्कहरूमा क्लिक गर्नु हुँदैन जुन सम्भावित मालिसियस छ किनकि यो खतरनाक छिमेकमा हिड्न मिल्दोजुल्दो छ। इन्टरनेट सामग्री को टुक्रा भरिएको छ जसमा मालिसियस लिंकहरू छन्। यदि तपाईंले होसियारीपूर्वक यस्तो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने, तपाईंको उपकरण मालवेयर वा भाइरस बाट संक्रमित हुन सक्छ।
तपाईको व्यक्तिगत डेटा उजागर गर्न सकिन्छ र तपाइँको बैंक खातामा पहुँच प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईको पहिचान चोर्न र मानिसहरुलाई चोर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसोभए, तपाईले क्लिक गरेकोमा सावधान हुनुपर्दछ। तपाईंले क्लिक गर्न लाग्नु भएको लिंक वास्तविक छ वा छैन जाँच्न प्रयास गर्नुहोस्। URL बाट, तपाई यो जान्न सक्नुहुनेछ। यदि लिंकको हेडलाईन स्प्याम्मी देखिन्छ भने, यो धेरै नै हुन सक्छ; कृपया यसलाई क्लिक नगर्नुहोस्। साथै, यदि तपाईं अर्को साइटमा निर्देशन दिईएको छ जुन मालिसियस जस्तो देखिन्छ भने, तपाईं पृष्ठ छिटो बाहिर निस्कनु पर्छ।
तपाईको पासवर्ड अनुमान वा दृष्टि पाउन सकिन्छ र तपाईले सोचेको पासवर्ड सुरक्षित गरिएको प्रत्येक चीज पहुँच गर्न सकिन्छ। समस्या यो छ कि मानिसहरूले सजीलो पासवर्डहरू छनौट गर्छन् जुन उनीहरू सजिलै याद गर्न सक्दछन्। दुर्भाग्यवस, यसले साइबर अपराधको लागि सजीलो लक्ष्यको रूपमा उनीहरूलाई राख्छ। त्यसकारण तपाईंले साइबर क्राइमर्सललाई पनी कठिन र जटिल पासवर्डहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ र नजिकका साथीहरू/आफन्तहरू पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईको कडा पासवर्ड कम्तिमा १ characters अक्षर लामो हुनुपर्दछ र अक्षर, संख्या र विशेष वर्णहरूको मिश्रण हुनुपर्दछ। तपाईंसँग पासवर्ड व्यवस्थापक (सफ्टवेयर) तपाईंको लागि बहु पासवर्डहरू प्रबन्ध गर्न सक्दछन् ताकि तपाईं तिनीहरूलाई नबिर्सनुहोस्। केवल समस्या यो छ कि यदि तपाइँको उपकरण गलत हातहरूमा पर्दछ भने, पासवर्ड व्यवस्थापकले उनीहरूलाई सम्भव बनाउँदछ तपाईंको सबै पासवर्डहरूमा, कुनै गाह्रो पर्दैन।
यदि तपाईंसँग बलियो पासवर्ड छ भने, तपाईं अझै पनी दुई-कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया सेट अप गर्नुपर्छ। यसमा तपाईंको लागि थप सुरक्षा प्रदान गर्दछ यदि एक ह्याकरले तपाईंको पासवर्ड सही तरीकाले अनुमान गर्‍यो भने। ह्याकरले अझै पनि तपाइँको डिजिटल सम्पत्तीहरू पहुँच गर्न सक्नेछैन किनकि दुई-कारक प्रमाणिकरणलाई थप प्रमाणिकरणको आवश्यकता छ। र अवश्य पनि, यसले तपाईंलाई सचेत गराउँदछ कि तपाईंको खाता भached्ग हुने खतरामा छ त्यसैले तपाईं यसको विरूद्ध द्रुत कदम चाल्न सक्नुहुन्छ।
VPN (भर्चुअल निजी नेटवर्क) को उपयोग इन्टरनेट सर्फिंग गर्दा सुरक्षित राख्ने एक उत्तम तरिका हो। VPN ले तपाइँको नेटवर्क एन्क्रिप्ट गर्दछ र तपाइँको IP ठेगाना मास्क गर्दछ, त्यसैले तपाइँ सुरक्षित हुनुहुन्छ जब एक इन्टरनेट सर्भरमा जडान हुँदा। यसको मतलब यो छ कि तपाईको डेटा निगरानी गर्न वा पहुँच गर्न सकिदैन जब तपाई वीपीएन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। साथै, मालवेयर तपाईंको उपकरणमा पहुँच गर्न सक्दैन।
तपाईंले VPN धेरै जसो सबै अवसरहरूमा प्रयोग गर्नुपर्दैन, तर यो विशेष गरी यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब तपाईं सार्वजनिक WIFI प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै साइटमा ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ जुन दुर्भावनापूर्ण देखिन्छ। तपाइँको अनलाइन सुरक्षाको पूर्ण आश्वस्त हुन उच्च-गुणवत्ता VPN प्रयोग गर्न कोसिस गर्नुहोस्।
साइबर अपराधले प्राय फाइलहरू, प्रोग्रामहरू र मालवेयरको साथ अनुप्रयोगहरू राख्छ। यसको मतलब यो हो कि एकचोटि तपाईंले ती संक्रमित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुभयो भने, तपाईंको उपकरण ती फाइलहरू वा अनुप्रयोगहरूका सिर्जनाकर्ताहरू द्वारा सजीलो पहुँच योग्य हुनेछ। किनकी तिनीहरू सजिलै तपाइँको उपकरण पहुँच गर्न सक्दछन्, ती तपाइँको बैंक विवरण पत्ता लगाउन सक्दछ, तपाइँको निगरानी, ​​वा शर्मिंदा कागजातहरू/चित्र/भिडियो चोरी गर्न जुन तपाइँलाई ब्ल्याकमेल गर्न प्रयोग गरिन्छ।
किन तपाईं शंकास्पद मूल संग फाइलहरू डाउनलोड गर्नु हुँदैन। साथै, तपाईले साइटबाट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नु हुँदैन जुन शंकास्पद देखिन्छ। गूगल प्ले स्टोर, विन्डोज र एप्पल स्टोर जस्ता प्रख्यात अनुप्रयोग साइटहरूमा पनि, तपाईले पहिले अनुप्रयोग को बारेमा प्रमाणित गर्नु पर्छ र ती डाउनलोड गर्ने अघि सिर्जना गर्नेहरूले।
कुनै पनि समय तपाईं अनलाइन केहि किन्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो क्रेडिट कार्ड वा बैंक खरीदको विवरण प्रदान गर्नुहुन्छ तपाईंको खरीदको लागि भुक्तान गर्न। त्यो विशेष जानकारी जुन तपाईं आफ्नो अर्डरको लागि भुक्तान गर्नुहुन्थ्यो साइबर अपराधीहरू आफ्ना हातहरू लिन चाहन्छन्। त्यसो भए, आफैंलाई सुरक्षित गर्नका लागि सुरक्षित, ईन्क्रिप्टेड जडानहरूको साथ प्रमाणित स्टोरहरूबाट अनलाइन खरीद गर्नुहोस्।
साथै, तपाईले यो साइट राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्दछ कि यो तपाईको जानकारी चोर्न साइबर क्राइमले बनाएको नक्कल साइट होइन भनेर। सुरक्षित साइटहरूसँग "https" को भागको रूपमा सामान्यतया "s" हुन्छ जुन हामीलाई उनीहरूको URL ठेगाना हो। यो सादा "http" हुनु हुँदैन। यो ठेगाना पट्टिको छेउमा प्याडलॉक प्रतिमाको साथ पनि चिह्नित हुनुपर्दछ।
व्यक्तिहरू तपाईले इन्टरनेट को माध्यम बाट डिजिटल भेट्नु हुने छैन जो तिनीहरू दावी गर्छन्। तिनीहरू नक्कली वा चोरिएको पहिचानको साथ अरू कसैलाई पोष्ट गर्ने ठगहरू हुन सक्छन्। तपाईं अनलाइन अपरिचित देखि सावधान हुनुपर्छ किन कि, तपाईं शारीरिक अपरिचित संग बस जस्तै। यदि तपाईं अनजान अनलाइनलाई सहज गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्ना विवरणहरू उनीहरूसँग बाड्न हुँदैन। साथै, सबै सम्बन्धहरू तुरुन्तै तोड्नुहोस् उनीहरूले पैसाको लागि सोध्नु सुरु गर्दछ (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा)। तिनीहरू प्रायः कन्न कलाकारहरू हुन्। ती दिनहरू धेरै सामान्य छन्, त्यसैले तपाईं अनलाईन अपरिचितहरूसँग व्यवहार गर्दा तपाईं सधैं होशियार हुनुपर्छ।
इन्टर्नेट सुरक्षा सफ्टवेयरले तपाईलाई अनलाइन सुरक्षा खतरा को सबै प्रकारहरु बाट बचाउन सक्दैन, तर तिनिहरु काफी हदसम्म तपाईको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दछ, विशेष गरी यदि ती अद्यावधिक छन्। तपाईको एन्टिभाइरसले त्यहि तरीकाले काम गर्दछ। तपाईको एन्टिभाइरसले तपाईको डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तपाईको उपकरणबाट सबै मालवेयर पत्ता लगाउन र हटाउन सक्छ, तर एन्टिभाइरसले यति धेरै प्रदर्शन गर्न सक्दैन यदि यो विकासकर्ता द्वारा प्रदान गरिएको नयाँ संस्करणमा अपग्रेड गरिएको छैन भने।
केही व्यक्तिहरूले महिनौं र बर्षहरूमा उनीहरूको एन्टिभाइरस अपडेट गरेका छैनन्; तपाई यस कोटीमा पर्नुहुन्न। त्यसोभए, सफ्टवेयर अपग्रेडको लागि बारम्बार जाँच्ने प्रयास गर्नुहोस् z यसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको एन्टिभाइरसले तपाइँको उपकरणको सुरक्षा गर्न सक्दछ, यसको क्षमताको राम्रोसँग, मालवेयर र अन्य प्रकारका कम्प्युटर/फोन संक्रमणको बिरूद्ध।
इन्टरनेट सर्फिंग अपरिहार्य छ, तपाईं आफ्नो सुरक्षा अनलाइन सुनिश्चित गर्न माथिको सल्लाह प्रयोग गर्नु पर्छ। तपाईं "मलाई केहि पनि हुन सक्दैन" वा "मसँग मेरा तरीकाहरू छन्" भन्ने धारणा हुन सक्छ, तर यदि तपाईंले सही सावधानी अपनाउनु भएन भने तपाईं इन्टरनेटको खतराबाट मुक्त हुनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईंले जान्नुपर्दछ। त्यसो भए सुरक्षित ब्राउजिंग अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाइँले Semalt मा यहाँ हाम्रो इन्टरनेट विशेषज्ञहरु लाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। हामी तपाईंलाई कसरी ईन्टरनेटमा सुरक्षित रहनका लागि मार्गनिर्देशन गर्न र तपाईंको ब्यावसाइट वेबसाइटको लागि थप सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दछौं। यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं, तपाईंको व्यवसाय र ग्राहकहरू सबै पर्याप्त मात्रामा साइबर खतराबाट सुरक्षित छन्।